IINDIDI ZEZITAYILE ZEFANITSHALA (UYILO LWEGALARI) - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala Iindidi zeZitayile zefanitshala (Uyilo lwegalari)
Iindidi zeZitayile zefanitshala (Uyilo lwegalari)
Wamkelekile kwigalari yethu yeentlobo zefenitshala yefenitshala kubandakanya neengcebiso eziluncedo zokufumana uyilo lwangaphakathi olugqibeleleyo.
Emva kokuba ufumene ikhaya lakho elifanelekileyo, kukho enye into ebaluleke kakhulu ekufuneka uyiqwalasele: Ziziphi iintlobo zefenitshala oza kuhlobisa ngazo.
Ukukhetha kwakho isitayile sefenitshala ayingombuzo nje osebenzayo. Ngokuqinisekileyo, udinga ibhedi kwigumbi lokulala, itafile yokutyela kwigumbi lokutyela njalo njalo, kodwa iintlobo zefenitshala yefenitshala ekhoyo nayo iyasebenza ukudala imeko-bume ethile. Ke uhlobo oluchanekileyo lwesitayile sefanitshala kufuneka luthelekise uluvo lwakho lokuba ufuna igumbi libukeke kwaye uzive njani.
Zintathu izinto eziphambili ezihlelwa yifenitshala: eyangoku, eyangoku neyemveli kwaye kwesi sithuba, siza kujonga kuzo zontathu ezi zinto.
Uhlobo lwefenitshala yangoku
Uhlobo lwefenitshala yanamhlanje
Ukuphumla kwale mihla
Uhlobo lwefanitshala yesintu
Ukukhetha Uhlobo lweFenitshala yoyilo lwangaphakathi
Ixesha langoku libonakaliswa ngemibala eqinileyo, imigca ebushelelezi, imibala engathathi hlangothi kunye nezinto ezahlukeneyo ezinje ngesinyithi kunye neglasi. Okwangoku yeyangoku, ayinazinto zininzi, zilungile, zinobunkunkqele, zinomoya kwaye ziyakhanya.
Olu hlobo luthanda iindawo ezinkulu ezivulekileyo kunye nemibala ekhanyayo eyenza nokuba iindawo ezincinci zibonakale zinkulu. Kukho indawo yokuhamba kwaye unomoya ovayo. Imibala engathath'icala igubungela uninzi lwendawo, kwaye imibala ibandakanyiwe kwiinkcukacha ezincinci ezinje ngokukhanyisa, iipilo, ubugcisa kunye neentyatyambo.
Ukukhanya kukwayinto enkulu kuyo isimbo sangoku apho kukho ukukhanya okuninzi kwendalo kunye nezinto ezingezizo ngokwendlela yezibane kunye nezibane.
Uyilo lonxweme lukhuthazwa lulwandle. Unxweme lolona hlobo lubalulekileyo kolu loyilo, olunika umoya opholileyo, oqhelekileyo, kunye neeholide-kwindawo. Olu hlobo lubandakanya imibala epholileyo enje ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, omhlophe nemfusa. Kukho izinto ezahlukeneyo ezincoma isitayile esifana neqokobhe, isanti, ukhuni, iintambo, umsonto kunye neglasi. Imbonakalo ye-nautical eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe ithandwa kakhulu ngolu hlobo. Imvakalelo iyonke yefayile ye- uyilo lonxweme ukhululekile, uzolile kwaye wonqena.
Isitayile setshintsho sidibanisa uyilo lwendabuko kunye nolwanamhlanje kunye nokwenza umdibaniso odibeneyo weklasikhi kunye nobunkunkqele. Sebenzisa izikimu ezilula zombala, imigca ethe tye, izinto ezithambileyo kunye nezinto zamva zoyilo lwenguqu luziva lucocekile kwaye lutofotofo ngaxeshanye.
Le fenitshala yavela eNgilani ekuqaleni kweminyaka yoo-1980. Uluvo olungemva kwesitayile sefenitshala yeShabby Chic kukuba nefenitshala eninzi yeediliya eyenziwayo ukuba ibe yexesha langoku kunye nokusetyenziswa kwempembelelo yepeyinti yobugcisa. Olu hlobo lwesitayile sefenitshala lukwathanda umbala wepallet ongathathi hlangothi odityaniswe nefuthe lesitayile seRustic.
Le ndlela yefenitshala yavela eScandinavia kwaye yenyuka yathandwa kwinkulungwane yokuqala yama-20. Ifenitshala yanamhlanje yaseScandinavia ilandela imiba emithathu: ukusebenza, ubuncinci kunye nokulula. Zihlala zisebenza kuyilo kwaye zihlala zenziwe ngomthi wendalo.
Ezi zizimbo zakutshanje, eziphuculweyo ngaphandle kokubambelela okwenyani kwexesha elithile. Bavame ukuphazamisa imigca phakathi kobugcisa kunye nokusebenza kwaye bahlala bedibanisa izinto ezivela kwiintlobo ezahlukeneyo zendabuko zefenitshala.
Uhlobo lwefenitshala yale mihla lwaphuhliswa ngexesha lokuhamba kwe-1900s. Isebenzisa iphalethi enemibala eminye kwaye ihlala yenziwe ngezinto zangoku ezinje ngentsimbi, ivinyl, iplastiki kunye nofele. Ifenitshala ilula kwaye ilula ngemigca ecocekileyo kunye neefom ezisisiseko. Iitafile zihlala zilula njengomthi okanye isinyithi, kodwa zihlala zihonjiswe ngeglasi ngenkangeleko ebengezelelweyo.
Isitayile sefenitshala encinci yindibaniselwano yeempawu ezithathwe kwiScandinavia Contemporary kunye nezobuGcisa kunye neCrafti yoyilo lwefenitshala kwaye ziyayidibanisa nobuhle besitayile sanamhlanje.
Iziphumo ziluhlobo olulula kodwa olunemibala ethanda iziqwenga ezisetyenziswayo ezinemilo ejikelezileyo kwaye ingenamiphetho. Akukho luhombiso luhombisayo okanye umhombiso apha.
Isitayile sefenitshala yeRetro uyilo lwangoku olunezinto ezifuna ukuxelisa iintsingiselo zefashoni zangaphambili. Ifenitshala yeRetro ihlala ifaka izinto eziyimibala yoyilo ezivela kwinkcubeko ye-pop ukwenza ukuziva kwe-whimsical.
Isimbo sokuyilwa saphakathi kwenkulungwane yayiyintshukumo eyaqala e-United States phakathi kweminyaka ukusuka ku-1945 ukuya ku-1965. Isitayile sigubungela ifanitshala, uyilo kunye noyilo lwegraphic. Inika ukusetyenziswa kweentlobo ezininzi ezahlukeneyo zezinto ezidityaniswe nemigca ecocekileyo kunye neejika ezifihlakeleyo.
Ifanitshala ekule ndlela inento yokwenza nobuhle obuncinci kwaye ifuna ukwenza imvakalelo ekhululekileyo kodwa enobunkunkqele. Ithanda ukufaka ii-silhouettes ezi-sleek ezidityaniswe nezinto ezithambileyo ezifana nelaphu eliphambili. Ibandakanya uninzi lwezinyithi kwiimpawu zayo zoyilo.
Izitayile zefenitshala yemveli ziphenjelelwa zizimbo zefanitshala zembali nezakudala. Ezi zizitayile ezaye zaduma kwiinkulungwane ezidlulileyo kwaye zihlala kunjalo unanamhla. Isitayile sefenitshala yesiNtu sineempawu zeNdlovukazi u-Anne, uSheraton, kunye nesimbo sefenitshala yaseChippendale. Inemigca ethe tye, imilenze ethambileyo, kunye nezinto ezininzi zokuhombisa.
Iifenitshala ezivela kwisitayile sokwakha ngokwesiko ikakhulu yimvuselelo evela kwi-18thIsiNgesi senkulungwane, 19thInkulungwane ye-neo-classic, ilizwe laseFrance kunye neBritane Colonial. Ezi fenitshala zinika imvakalelo yeklasikhi yendawo engaphumiyo kwisitayile. Esi simbo simalunga nokuthuthuzela, ukufudumala, ukuqheleka, kunye nocwangco.
Ibhalansi ifezekiswa ngokudibanisa iimpahla ezincinci nezikhulu ezisebenza ngeenjongo ezininzi kwisithuba. Imibala eshushu ihlala isetyenziselwa isitayile sendabuko esinjenge khrimu, igolide, ngwevu, nomdaka. Kukho iintyatyambo, imivimbo, kunye neeplaids ezongeza ubume kunye nomdla.
Isitayile sefenitshala sidibanisa izinto ezininzi ezivela kwizitayile zefanitshala zesintu ebezithandwa kwimbali yaseMelika yokuqala. Ke inezimpawu ezivela kuJacobean, uWilliam noMary, u-Queen Anne, uPennsylvania waseDutch, kunye nezimbo zefanitshala zeChippendale.
Ifanitshala ekwahlulelwa ukuba isesitayeleni seAntique ihlala ineminyaka elikhulu ubudala. Uninzi lwefanitshala ye-antique ngumthi kwaye isebenzisa iinkcukacha ezimbejembeje nezingafaniyo.
Iidiliya ziyafana nezinto zakudala ngengqondo yokuba indala. Ifenitshala yeediliya, nangona kunjalo, incinci kune-Antique. Ukuba yi-50 ukuya kwi-100 yeminyaka ubudala, ihlelwa njengeVintage. Kudala kunoko, yiAntique.
Isitayile seediliya sihlala sinyanisile kwigama laso. Iziqwenga ezisetyenzisiweyo zivela kwixesha elithile. Iziqwenga zeediliya bubuncwane beentengiso zentakumba, ukuthengiswa kwegaraji, ukuthengiswa kwempahla, iivenkile zokugcina ukutya kunye neevenkile zakudala. Nangona kunjalo, iziqwenga zeediliya zifuna ukhathalelo kwaye umntu kufuneka ayazi ukuba angazigcina njani ezi ziqwenga zohlobo.
Inkangeleko yeediliya ayikhawulelwanga kwizixhobo ezindala zefanitshala okanye ezokuhombisa. Abaqulunqi bahlala bongeza iziqwenga ezitsha njengokukhanyiswa kwezibane, iikhaphethi, okanye ubugcisa ukufezekisa ukujonga okufunwayo ngokubanzi. Ukuvunwa rhoqo kwamaxesha kubhengeza umbono wokukhumbula kubo bobabini abalandeli kunye nabanini.
Ifanitshala yeediliya yenziwe ngocoselelo kodwa ikwabonakaliswa bubuhle bobugcisa. Uhlobo lweediliya luhlala lubeka injongo. Iziqwenga azikhethelwa ukubonakala kwazo kuphela, kodwa nangenjongo yazo. Uninzi lweziqwenga zeediliya ziye zacocwa ukubonelela ngenye injongo. Iikhabhathi ezindala zinokuhlaziywa kwiitafile ezisecaleni. Iingcango ezindala zinokwenziwa kwiitafile zokutyela.
Inkangeleko yeediliya isebenzisa imibala ephambili yesitshixo esisezantsi njenge beige, ngwevu kunye nekhrimu. Le ndlela ihlala ichazwa njengethandekayo kunye neyothando. Nangona kunjalo, ayizizo zonke ukubonakala kweediliya eziyimbali. Ezinye iifenitshala zinokudala ukuba zibonakale zindala kwaye zisetyenziswa.
Uhlobo lwefenitshala yaseRustic lubonakaliswa kukusetyenziswa kwezinto zendalo. Ngokusebenzisa imithi, ukufihla, ilinen kunye nekotoni, ifenitshala yaseRustic ifuna ukuzisa imfudumalo kunye nokunyaniseka kwigumbi. Bona Okuninzi uyilo lwegumbi lokuhlala Apha.
Isitayela sefenitshala yaseJacobean saqala ngexesha lokuvuselelwa kwesiNgesi kwasekuqaleni okwenzeka malunga ne-1600-1690.
Olu hlobo lubonakaliswa kukusetyenziswa kwemigca ethe tye kunye nokugqitywa kobumnyama. Into eqhelekileyo yoyilo lwefanitshala yeJacobean kukusetyenziswa kwemizobo embejembeje njengezinto zokuhombisa.
Le ndlela yefenitshala inyuke ngokuthandwa ngexesha le-1690 ukuya kwi-1735. Iimpawu ezimbini zoyilo eziqhelekileyo kwifenitshala eyenziwe kwisitayile sikaWilliam noMary kukuba banexilongo elijikeleze imilenze edla ngokuphela kwiinyawo zebhola zaseSpain.
Olu hlobo luchaphazeleka kakhulu kukuyilwa kwefenitshala yaseDatshi neyesiTshayina. Mhlawumbi owona mzekelo ubalaseleyo kwezi mpembelelo yinto yokuba zihlala zibonisa umsebenzi we-lacquer yaseMpuma.
Le ndlela yayithandwa kwinkulungwane ye-18, xa uWilliam III no-Queen Anne babelawula eNgilane. Uhlobo lwefenitshala u-Queen Ann laziwa ngokuba nemilenze ye-cabriole enephedi okanye iinyawo zedrake.
yintoni inkqubo yomtshato
Izitulo ezixhaswe ngefiddle zazidumile ngeli xesha, ke zazinjalo nezitshixo zamaphiko e-bat kwaye ezi ntlobo zimbini zefenitshala ziye zahlala ziyimpawu yesimbo sika-Queen Anne nanamhlanje.
Isitayile sefenitshala senyuka ngokuthandwa ngexesha le-1760-1789, ngexesha lolawulo lukaLouis XVI naphambi nje kokuba i-French Revolution isuse ubukumkani. Ngaphandle kokubizwa ngegama lokumkani wase-France, isitayile sabo sasenzelwe ukumkanikazi, u-Marie Antoinette.
Le ndlela yefenitshala ibonakaliswa yimigca ethe ngqo eneempembelelo zamaGrike namaRoma. Isebenzisa uninzi lweempawu zodidi lwakudala ezinje kunye nokubetha. Ikwanemifanekiso ecacisiweyo etyebileyo.
AmaFrentshi ahlala esaziwa njengabaphathi besitayile, kwaye oku akubeki ecaleni kuyilo lwangaphakathi. Uyilo lwangaphakathi luzaliswe ngegolide, ubhedu, izinto zakudala, amalaphu aqingqiweyo, kunye nobugcisa obunencasa. Izinto ezidumileyo ezisetyenzisiweyo kwi Uhlobo lwesiFrentshi ifanitshala yilnut, mahogany, oki, rosewood, maple, copper, copper, mother pearl and cast iron. Ifanitshala inokubunkunkqele, ibe nesibindi kwaye ihonjiswe ngokutyebileyo ngeempawu ezakhiwe.
Kule minyaka, uyilo lwangaphakathi lwaseFrance lukhule kunye neempembelelo ezivela kwezinye iindlela ezinje ngelizwe, i-eclectic, kunye nexesha langoku. AbaFrentshi bathanda uyilo lweklasikhi olungaze luphume ngesitayile. Bayakuthanda ukubonisa izinto zabo zakudala kunye nelifa. Imibala ikuyo yonke indawo ukusuka kwiintyatyambo ukuya kwiifreyimu nakwifenitshala. Iimpawu ezahlukeneyo zinokufumaneka kwindawo yonke.
Isitayela sefenitshala senyuka ekuthandeni ekuqaleni kwekhulu le-18 neye-19 eMelika. AmaPennsylvania amaDatshi ayengabafuduki bokuqala ukuya eMelika bevela eJamani, ke isitayile sefenitshala siphawule iimpembelelo zaseJamani.
I-Pennsylvanian Dutch yayinenkolo kakhulu kwaye ibalwa njengobungqongqo kunye nokuphila okulula njengezidima. Ke ayothusi into yokuba isitayile sefenitshala abayisebenzisileyo sisetyenziswa kakhulu ngemigca elula, ethe tye. Ngaphandle kokusebenziseka, nangona kunjalo, ifenitshala yasePennsylvania yaseDutch nayo inemibala kwaye ihonjiswe ngemizobo yabantu.
Indima yesimbo yokuthandwa ngo-1750-1790 xa ifanitshala eyenziwe ngumenzi wekhabhathi yaseLondon ebizwa ngokuba nguThomas Chippendale yaqala ukubamba iliso lezityebi kunye nezoqoqosho.
Ieperile nedayimani yokubandakanya
Ifenitshala yeChippendale ibandakanya izinto ezivela kwisitayile sikaKumkanikazi u-Anne kwaye ineempembelelo zeGothic, isiTshayina kunye nesiFrentshi. Uyilo lwesimbo olucace gca ukuba yiChippendale kukusetyenziswa kwebhola kunye neenzipho, iinyawo zecabriole, kunye nokongezwa kwempempe yentsimbi eyaphukileyo ngaphezulu.
Ngexesha elifanayo apho ifenitshala yeHepplewhite yayidumile, omnye umyili wefenitshala yesiNgesi wayekhula ngokuqaqamba. Ukususela malunga no-1780-1820, ezinye zeempahla zefenitshala ezithandwa kakhulu yilezo zenziwe nguGeorge Sheraton.
USheraton wayekuthanda ukulula kunye nemigca ethe tye kwaye oku kunokubonwa kwisitayile sefenitshala yeSheraton. Ubuye wasebenzisa ii-veneers ezichaseneyo kodwa iinyawo ezinamathambo kuphela kuyilo loyilo lwamaxesha athile.
Le fenitshala yaqala ukuthandwa eUnited States emva ngo-1765-1800. Isitayile sefenitshala sithathe igama laso kumyili waseLondon uGeorge Hepplewhite.
Ifenitshala ye-Hepplewhite ineempembelelo ze-Neoclassical kunye nembonakalo entle kakhulu. Isebenzisa imilenze emininzi ethintelweyo, inlay, kunye neeneveners ezichaseneyo.
Le ndlela yefenitshala yavela ngaxeshanye nefenitshala yeHepplewhite kunye neSheraton kwaye ithathwa njengendibaniselwano yazo zombini.
Isitayile sefenitshala yase-Federal sisebenzisa uninzi olunobabalo, imigca ethe tye. Njengezitayile ezizenzileyo, isebenzisa ii-veneers ezichaseneyo njengombala wokuhombisa. Ikwasebenzisa uninzi lweempawu ze-neoclassical.
Isitayela sefenitshala sasithandwa ngekhulu le-19 le-US. Kwakufuneka iphefumlelwe ziitayile zefenitshala yaseFrance. Isitayile sefenitshala yoBukhosi baseMelika saziwa ngokusetyenziswa kwemihlobiso yeklasikhi kunye nemizobo yekhosi. Ifanitshala kule ndlela yokwenza izinto inesiphelo esimnyama.
Njengoko eli gama lichaza, iintlobo zeAsia zefanitshala zefenitshala ziqokelela inkuthazo evela kumazwe ahlukeneyo aseAsia. Izwekazi likhulu, kwaye inkcubeko ityebile, ke zininzi iindlela zokufaka uyilo lwaseAsia kwindawo yakho. Uyilo lwaseAsia lunezinto ezenziwe ngomthi ezifana noqalo kunye nerattan, imibala etyebileyo efana nobomvu kunye nokuphuzi, imibala ezolileyo enjengamhlophe noluhlaza, abalinganiswa benkcubeko abafana neempungutye, kunye nefuthe lenkolo njengoBuddha noothixo bamaHindu.
Uyilo oluncinci lwaseJapan lubonisa ukuzola kunye noxolo. Ifenitshala icocekile kwaye ilula. Kukho ukuhonjiswa okumbalwa ukuze indawo ibonakale inkulu. Iindonga zikwimibala engathathi hlangothi emhlophe, ngwevu okanye mdaka. Ukutshiza kombala kunokufumaneka phakathi kwemiqamelo, iivazi, okanye ubugcisa.
Le ndlela yefenitshala yaphuhliswa ngexesha lamaNgesi uVictoria, yiyo loo nto ibizwa ngokuba ngu-Queen Victoria. Ithuba leVictorian yayisisiqalo soguquko kwimizi-mveliso ngoko ke ifanitshala yaseVictorian ikwanomahluko wokuba yisitayile sokuqala sefenitshala esikwaziyo ukuthatha ithuba lokuvelisa.
Isitayela sefenitshala sinobunzima obunzima kunye nokugqiba okumnyama. Inefuthe lamaRoma njengemihombiso ebanzi.
Isitayela sefenitshala savela ngexesha loBugcisa kunye neCraft 1880-1910. Le ntshukumo ijonge ekubuyiseni kwakhona ubugcisa kunye nobugcisa bokulungileyo obuveliswe ngaphambi koHlaziyo lwezoRhwebo kunye nokunyuka kwemveliso. Isitayile sefenitshala yoBugcisa kunye nobuGcisa luphawu olusebenzisekayo kwaye luyilo olulula.
I-deco yobugcisa ibonakaliswe ngohlengahlengiso kunye neemilo zejiyometri. Olu hlobo lwaduma kwii-1920s nee-1930s. Igama elithi art deco livela kwibinzana lesiFrentshi lobugcisa, elichaza apho le ndlela yavela khona kuqala ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi I. I-Art deco ngumfanekiso wobunewunewu kunye nobutsha. Yindibaniselwano yeendlela ezahlukeneyo neziphikisanayo. Ukuza kungekudala emva kokuba ubuGcisa bobuGcisa nobuChule bufikelele esiphelweni, u-Art Deco wavavanya ukusetyenziswa lula kwentshukumo yangaphambili.
unxiba njani umcimbi omnyama wokubopha
Ifenitshala yobugcisa be-Art Deco isebenzisa imibala enesibindi kunye nenamandla kunye neemilo zejiyometri. Iziqwenga zobugcisa zibandakanya iicubism, intsimbi engenasici, iplastiki kunye nezibuko. Uhlobo luthanda ukufaka izinto ezingaqhelekanga ezifana nesinyithi, iinkuni ezingaqhelekanga, kunye nezinto ezifakwayo ezenziwe ngeempondo zendlovu. I-Art deco ayifumaneki kuyilo lwangaphakathi kuphela, kodwa nakwipeyinti, umfanekiso oqingqiweyo, ubucwebe, ifanitshala kunye nobugcisa.
Uyilo lwangaphakathi lwenza indawo ukuba icwangciseke ngakumbi, ikhuseleke, intle, kwaye isebenze ngeenjongo zayo. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, uyilo lwangaphakathi alubeki kuphela ifanitshala endaweni. Uyilo lwangaphakathi bobabini bubugcisa kunye nesayensi.
Ukudityaniswa kwemibala kwisithuba kuseta imeko yayo. Ivili lemibala lisetyenziselwa ukumisela ukuba yeyiphi imibala ehamba kunye ngokugqibeleleyo ukufezekisa imvakalelo ethile kwisithuba. Ukuchonga ifanitshala efanelekileyo kuya kwenza ukuba indawo ibonakale iphangalele ngakumbi nokuba ungakanani na. Ikwasombulula iingxaki zokugcina ngeendawo ezincinci ngokudibanisa ifanitshala ngeenjongo ezininzi.
Ukuhonjiswa kwendawo edityaniswe ngumyili kuyenza ibe yeyakho kwaye kuyenze ibe mnandi kumniniyo. Inika indawo indawo yokuba lilungu, intuthuzelo kunye nokukhuseleka.
Zininzi iindlela zoyilo lwangaphakathi ezikhoyo, kwaye nganye nganye ithetha ngokwahlukileyo ebantwini. Ukukhetha isitayile yoyilo ngokuqinisekileyo kuyanceda wena kunye nomyili wakho ukhethe into oyifunayo kwindawo yakho.
Ekupheleni kosuku, iintlobo zefenitshala oyikhethayo ixhomekeke kukhetho lwakho. Uhlobo lwefenitshala kufuneka luhambelane nombono wakho wento ofuna ukuba igumbi livakale. Ufuna ukuba igumbi lakho lizive njengendawo onokonwaba kwaye kamnandi uchitha ixesha elininzi kuyo kunye nesitayile sefenitshala oyikhethileyo inokukhulisa loo mvakalelo.
Kuyilo olunxulumene ngakumbi jonga eyethu iintlobo zezitulo igalari.
Ungabufihla njani uBukhosi: Imbali ye-Greate… $ 18.45$ 30.00 umthengisi ogqibelele (943) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Uyilo lwenguqu $ 39.95 umthengisi ogqibelele (6) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ubomi bukaLouis XVI $ 29.37$ 40.00 umthengisi ogqibelele (36) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ifanitshala: Izitayile zeHlabathi ukusuka kuClassical ukuya kwiCo… $ 18.99$ 50.00 umthengisi ogqibelele (124) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Apho ukuthenga amakhonkco omtshato abicah
Indlela eya emfazweni $ 9.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-241 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ukwenza Ubugcisa befanitshala: 30 P… $ 22.95 umthengisi ogqibelele (31) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Uhlobo lweFrentshi ngokufumana iVintage: Umnqweno we… Iidola ezingama-25.80$ 39.95 umthengisi ogqibelele (65) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UMnumzana uKumkani ngqo noMenzi weKhabinethi… $ 51.00 umthengisi ogqibelele (4) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Iimpahla zokuhlamba zomtshato zomtshakazi
uyazi kuphela into endiyifunayo kuwe
I-neil lane indandatho yokuzibandakanya okweqanda
menzele iikowuti zothando